" ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ေမတၱာတရား "
ကျွန်တော့ FB acc ကို ဆရာ၀န်အချာဘောက်မ Eric Yang post ကိုအကြောင်းပြပြီး ပန်ဆယ်လိုအဖွဲ့ က Report ၀ိုင်းထုခိုင်းလို့ Locked ကျနေတဲ့ရက် ၃၀ အတွင်း ဒီကဘဲဆက်တင်နေဦးမယ်နော်
သူဘုံးထားတာတွေကို ကျွန်တော် သူ့အတွင်းလူတွေဆီကနေသိသမျှအတိအကျပြန်တင်ထားတော့ ဒီကောင်မကျွတ်ကျဲပြီး နောက်ကွယ်ကပြန်လိုက်လုပ်တော့တာဘဲ
အဲ့ဒါတွေကို သူလုံး၀ Mention လုပ်ပြီး ဒဲ့ မရှင်းရဲဘူး
ခု ဒီကောင်မ USD$ တွေအများကြီး သူ့လက်ထဲမှာရှိနေပေမယ့် သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ဆုတ်လဲစူး စားလဲရူးဖြစ်နေပြီး ငွေထုပ်ကြီးပိုက်ပြီး တရား၀င်သုံးမရတဲ့ ငွေပြိတ္တာဘ၀ရောက်နေတယ်
US မှာနေရင်း သူ့ဆီကို ဒီမှာလူကိုယ်တိုင်ပေးထား တစ်ခြားနိုင်ငံကနေလူကြုံနဲ့ လှမ်းထည့်ပေးထားတဲ့ Cash တွေချည်းက ၇ သိန်းကျော်ရှိနေပြီ
ဒါပေမယ့် သူ့မှာ US laws တွေက တရား၀င် အလှူခံဖို့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ NPO (Non-Profit Organization) license မရှိဘူး
ဒီတော့ အဲ့ဒါ​ကြောင့်သူရထားတဲ့ USD$ တွေက ငွေမဲတွေဖြစ်နေတော့ US IRS (Internal Revenue Service) အခွန်ဌာနက လိုက်မှာကို​သူ့အသိကပြောထားတော့ East Coast က ဇော်ဝေစိုးတို့ အဖွဲ့သားတွေဆီမှာ NUG နာမည်နဲ့ ပို့ထားရတယ်
ဇော်ဝေစိုးတို့ကို တရား၀င်ပြဖို့လိုတဲ့ စာရင်းအရက ၂ သိန်းကျော်ဘဲရှိတော့ ကျန်တာသူဘုံးပြီးသွားပြီ
ကျန်တဲ့ $ တွေက UK Australia Singapore Germany က Bank တွေမှာ NUG ကိုစာရင်းပြပြီးပို့ထားပြီးပြီ
ဒါတောင် NUG က အကုန်ထုတ်လို့မရသေးဘူး
ဇော်ဝေစိုးတို့နောက်ကိုလဲ CIA က Illegal Arm Trading တွေအတွက်လိုက်နေလို့ သူတို့သုံးဖို့ဘဲ တစ်လကို ၈ ထောင် နဲ့ ၉၀၀၀ ကြားလောက်ဘဲ IRS မလိုက်အောင်ထုတ်သုံးနေကြရတယ်
သူ့လက်ထဲက Cash တွေကိုတော့ သူယုံတဲ့ US အမာခံတွေဆီမှာ တစ်စဆီ ခွဲအပ်ထားတယ် သူ့လက်ထဲမှာ မထားရဲဘူး
အပ်ထားတဲ့လူတွေကိုလဲ တော်လှန်ရေး လျှို့၀ှက်ချက်အကြောင်းပြပြီးတစ်ခြားသူတွေကို ပြန်မပြောဖို့ကြိုပိတ်ထားတော့ သူ့စုစုပေါင်းငွေဘယ်လောက်ရှိနေပြီဆိုတာ အချင်းချင်းမသိကြဘူး
သူဘုံးထားတဲ့ USD$ Cash တွေမှာပြဿနာရှိနေတာက
လူတစ်ယောက် US မှာ Bank Acc ဖွင့်ပြီး 9999$ ကျော် တစ်သောင်းနဲ့အထက် အထုတ်/အသွင်းလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ US IRS (Internal Revenue Service) အခွန်ဌာနကို Bank က Cash (Income/Transaction) Reporting Law အရ
အ၀င်/အထွက်နှစ်ခုလုံးကို Automatic Report လုပ်ကိုလုပ်ရတယ်
မလုပ်ရင် Money Laundering Law အရ Crime မြောက်လို့ Bank တွေကဖေါက်ဖျက်လို့မရဘူး
Bank System ကိုက 10000$ ပြည့်သွားတာနဲ့ IRS server ကို Transaction Auto Submit လုပ်တာဆိုတော့ နှစ်ကုန် ၀င်ငွေခွန်စစ်တဲ့ စာရင်းထွက်လာလို့ သူ့နာမည်အောက်မှာ အကုန်ပေါင်းပေါ်ရင် အ၀င်အထွက် အကြောင်းတိကျတဲ့စာရင်းပြပြီး မဖြေရှင်းနိုင်ရင် ဆွဲစိခံရမှာ
ဒါကြောင့် သူရော NUG ရော တစ်သောင်းကျော်တဲ့ Transaction တွေ သုံးပြလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ
သူ့ကိုကူညီနေတဲ့သူတွေထဲက သူလိုက်မေးတော့ ပိုက်ဆံသိန်းနဲ့ချီပြီး FBI လိုက်ခံရမှာစိုးလို့ ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ဘယ်သူကမှ ခေါင်းခံပြီး ဘဏ်ထဲထည့်မထားပေးရဲဘူး
ခေါင်းခံပြီးသိမ်းထားပေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေက ထွန်းအောင်ကျော်တို့ မိုးသီးဇွန်တို့လို လူလိမ်တွေကချည်းဘဲ ၀မ်းသာအယ်လဲခုန်ဆွကြိုဆိုနေတော့ သူမယုံရဲဘူး
ဒါကိုကောင်မက စားပွဲထိုး/ပန်းကန်ဆေးတဲ့သူတောင် ကားစီး အိုင်ဖုန်းကိုင်နိုင်တဲ့ US မှာ ကား၀ယ်စီးတာဘာထူးဆန်းလဲ ဘာညာလျှောက်ရေးနေတာကို မြန်မာပြည်က မသိတဲ့လူတွေက အဟုတ်ထင်နေတယ်
သူပြောသလို ပန်းကန်ဆေးပြီး ကားစီး ဖုန်းအသစ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ဒီမှာနေတာကြာပြီး US Credit Bureau system ထဲမှာ နှစ်တော်တော်ကြာပြီး Credit Score (B tier) 680+ (or) A tier 740+ ရှိမှလုပ်လို့ရတာ
သူပြောသလို ကားစီး iPhone အသစ်ကိုင်ဖို့ဆိုတာ ရောက်တာကြာနေပေမယ့် Credit မကောင်း မရှိသေးလို့ မတတ်နိုင်တဲ့ မြန်မာတွေအများကြီးဆိုတာ ဒီမှာရောက်နေတဲ့သူတိုင်းသိတယ်
မနေ့တစ်နေ့ကမှရောက်တဲ့ သူ့ Credit Score ကိုခုစစ်လိုက်ရင် Bureau System ၃ ခုဖြစ်တဲ့
Experian, Equifax, Transunion ၃ ခုလုံးမှာ Score လုံး၀မရှိသေးဘူး
ကျွန်တော်က ကားပွဲစားမို့ Bank Loan တွေနဲ့အလုပ်လုပ်လာတာ နှစ် ၂၀ နားနီးနေပြီ
Credit System ကို အာဂုံဆောင်ထားသလို နားလည်တဲ့သူ
Credit Bureau System တွေအကြောင်းသိချင်ရင် အဲ့ဒိနာမည်တွေနဲ့ Google ကြည့်လိုက်ပါ
သူ့နာမည်နဲ့ အကြွေး၀ယ်ဖို့မပြောနဲ့ Credit Card Cell Phone တောင် လျှောက်လို့မရသေးသလို
အိမ်ငှားနေရင်တောင် Application ကို လက်မခံဘူး
သူလာတာ Refugee Visa နဲ့လာတာ
ဒီမှာ Social Security, State မှတ်ပုံတင် ID, ATM Debit card ၃ မျိုးဘဲရထားတာသိပ်မကြာသေးတဲ့သူကို ဘယ် Financial Institution ကမှ မယုံသေးဘူး
ဆိုလိုတာက ခုသူတို့တစ်မိသားစုလုံး သုံးနေသမျှငွေတွေဟာ သူပြောသလို American Credit System နဲ့ သုံးနေတာတွေမဟုတ်ဘူး
အားလုံးက သူဘုံးထားတဲ့ Cash အစစ်တွေနဲ့ချည်းဘဲသုံးနေတာပါ
ဒီမှာ သူနေတဲ့ သိပ်အေးတဲ့ State မှာ အိမ်ထောင်စုတစ်စုရဲ့လစဥ် Average ကုန်ငွေက
2 -4Bedroom အိမ်လခ အနည်းဆုံး 2000$ - 2500$
လျှပ်စစ်မီးဖိုး 200 - 300$$
Gas မီးဖိုး 100 - 200$$
ရေဖိုး 200$ - 300$
အမှိုက်ကားဖိုး 60$ - 80$
Cell ဖုန်း 200 - 250$
Cable TV 80$ -100$
Internet 80$ - 100$
နေစားရိပ်ကြီးဘဲ 4000$ နီးပါး
လူတစ်ယောက် စားစားရိပ်က အနည်းဆုံး
တစ်ယောက်ကို 600$ X5=3000$
တစ်လ 7000$ နီးပါး
ဒီနိုင်ငံမှာ ဘာဘွဲ့မှမရ ဘာလုပ်သက်မှလဲမရှိ
ဘာ Language Skills မှလဲမရှိတဲ့သူတွေ
Minimum Wage က သူတို့နေတဲ့ State မှာ သူ့ယောကျ်ား တစ်ယောက်ဘဲ အလုပ်လုပ်ရင် တစ်နာရီကို 12$ ဘဲရတော့ Full Time လုပ်ရင်တောင် တစ်ပါတ် နာရီ ၄၀ ကို 480$ ထဲက Income Tax 25% 120$ နှုတ်လိုက်ရင် 360$
၄ ပါတ်မှာ တစ်လ 1440$ ဘဲ အိမ်ပြန်ပါလာမယ်
ဒီတော့ ကျန်တဲ့လိုငွေ 5560$ က ဘယ်ကဆွဲသုံးနေတယ်ထင်လဲ
သူရောက်တာ ၁ နှစ်နီးနီးမှာ
တစ်လ 5500 X 11 ဆိုရင်တောင်
အလှူငွေတွေထဲက 60500$ သုံးပြီးနေပြီ
အဲ့ဒါလဲ အသစ်ဆိုရင် IRS လိုက်တဲ့အခါ ရှင်းရလွယ်အောင် အဟောင်းဘဲ၀ယ်ထားရတာ
ရောက်ရောက်ချင်း ကားမောင်းလိုင်စင်တောင်မရခင်ကတည်းက မြန်မာပွဲစားတွေနဲ့ ကားအသစ် အိမ်အသစ်တွေလိုက်ကြည့်ပြီးမှ သူ့အခြေအနေသူသိပြီး လူတွေရိပ်မိမှာကြောက်လို့အိမ်လဲ၀ယ်လို့မရဲ ကားလဲအဟောင်းနဲ့ဘဲ အာသာဖြေလိုက်ရတာ
ဒီတိုင်းဆို တတိတိနဲ့ နှစ်ကြာလာရင်ပြောင်တော့မှာသိလို့ နင်းကန်အလှူတွေခံပြနေတာ
ခုချိန်ထိ ထိုင်းနယ်စပ်က ကလေးတွေစားစားရိပ် နေစားရိပ်ကို NUG ကသူတိုက်ရိုက်ပို့တာ ၂ သောင်းတောင်မကျော်သေးဘူး
မင်းမော်ကွန်းဆီတော့ သပ်သပ်တိုက်ရိုက်ပို့တာ ၄ ခါ စုစုပေါင်း တစ်သောင်းကျော် ဟိုမှာဆေး၀ိုင်းချလို့ကုန်ခဲ့ပြီးပြီ
ဒီမှာ ဘာမှမလုပ်တတ်လို့ VOA က သန်းလွင်ထွန်း နဲ့ RFA က ခင်မောင်စိုး ဆီမှာ အလုပ်တောင်းသေးတယ်
သန်းလွင်ထွန်းက PDF တွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အမေရိကန် အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ငြိနေလို့ မခန့်ရဲဘူး
RFA က ခင်မောင်စိုးက သူများမယားတစ်ကာ နှိုက်စားနေကျဏှာဘူးဆိုတော့ အတင်းခန့်ဖို့လုပ်နေတုန်းဘဲ ဒါပေမယ့် သူတို့ Policy နဲ့လဲ ငြိနေတော့
"သမီးအတွက် ဦးအမြဲစဥ်းစားနေတယ် အေးဆေးလူချင်းတွေ့ပြီးတိုင်ပင်မယ်" ဆိုတဲ့အဆင့်မှာ တိုင်ပါတ်နေတုန်း
ခုလောက်ဆို ဘယ်နှစ်ချီအလကားဆွဲစားပြီးပြီလဲမသိဘူး ခင်မောင်စိုးက မဆလ လက်အမြန်စား
DVB ကိုလဲလှမ်းချိတ်နေသေးတယ် ဟိုက US 1300$ လောက်ဘဲ Offer လုပ်တော့ စျေးငြှိနေတုန်း
သူ့ကို Terrorist Organization တွေကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီး စကစ ကရော American ရောက် မြန်မာတစ်ချို့ကပါ FBI နဲ့ CIA ကို Report လုပ်ထားပြီးပြီ
လောလောဆယ်တော့ ဇော်ဝေစိုး နဲ့ ကျော်မိုးထွန်း ပန်ဆယ်လို ၃ ယောက် လက်၀ါးချင်းရိုက်ပြီး Bonds တွေနဲ့ Click2Donate + ဒီက မြန်မာတွေလုပ်တဲ့ တော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေပွဲတွေက ရသမျှ စာရင်းပေါက်အလှူငွေတွေ
ဘယ် Public ကိုမှချပြစရာမလိုတဲ့ Top Secret Funds တွေကို အချိုးကျဝေစားမျှစားလုပ်
ပန်ဆယ်လိုက Cash နဲ့ ရသမျှတွေကို သူ့အိပ်ထဲ 90% ထည့်ပြီး PDF တွေကို စေတနာပေါ်သလောက် မစို့မပို့ပစ်ပေးရင်း American Dreams တွေနဲ့ သာယာနေကြလေရဲ့
မလှူကြရင် ပန်ဆယ်လို ၁၀ နှစ်လောက်အတွင်း ငွေစကြပ်တော့မှာနော်
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ စောက်ပိန်းအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ရေ
အရင်ဆုံးပြောချင်တာက ကျွန်တော်ပြထားတဲ့စာရင်းမှာ ထည့်တွက်ဖို့မေ့နေတဲ့ ကားဓါတ်ဆီဖိုးဗျ
ခုက ဓါတ်ဆီက တစ်ဂါလံ 5$ နားကပ်နေတာဆိုတော့ မိသားစုတစ်စု ဆီစားများတဲ့ကားနဲ့ နေ့တိုင်းသွားလာနေရင် သူပြောတဲ့ 500$ တောင်မကပါဘူး 700$ လောက်ရှိနိုင်တယ်
ဒီတော့ အပိုင်း (၂) မှာကျွန်တော်တွက်ပြထားတာကို 700$ ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင် တစ်လကုန်ငွေ 7700$ ထိတက်သွားပြီ
ဆိုတော့ လိုငွေက တစ်လ 6260$ ဖြစ်နေပြီ ဟဲဟဲ
ဘုံးငွေက တစ်နှစ်အတွင်း 6260 X 11 = 68860$
(Double) ဒဗလယ် ၀ါးးးးးး
ဘာမှကို မသုံးမ၀ယ်နေမယ် မစို့မပို့စားမယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မလား
("နားမလည်တာက အချိန်ကွာဟမှုတွေကြား ညအိပ်ချိန်ထဲကကို စောက်လုပ်တွေများနေတဲ့ ကိုယ်က သူ့လိုအကောင့်မျိုးကို သူများကိစ္စနဲ့ Report ထုရဦးမတဲ့။ LOL စောက်ပေါ။ 😂")
ဒီမှာတစ်ရက်ထည်း သူ့လူတွေ သူ့နာမည်ပါတဲ့ Post ၃ ခု ကို Report ၀ိုင်းထုထားတဲ့ပုံ
("နံပါတ်(၂) ဘုံးထားသမျှကို အတွင်းလူက တဆင့် သိတယ်တဲ့။ ပန်ဆယ်လို့မှာ အတွင်းလူဆိုတာ နှစ်ယောက်အပြင် မရှိဘူး")
အတွင်းလူက တစ်ကယ်တော့ ၄ ယောက်လောက်ရှိတယ် သူမသိတာက အဲ့ဒိလူတွေရဲ့မိသားစုတွေက စောက်တင်းပြောတတ်တဲ့မြန်မာတွေချည်းဘဲ
America က မြန်မာတွေဟာ မြန်မာပြည်ကလူတွေထက် စောက်တင်းတုတ်တတ်မှန်း သူမသိရှာဘူး
ဒီလူတွေက သူတို့အိမ်ထောင်တွေ မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုတောင် လုံး၀ပြန်မပြောတတ်အောင် Trained လုပ်ထားတဲ့ CIA Agents တွေမဟုတ်ဘူး
ရိုက်စစ်စရာတောင်မလိုဘဲ အတိအကျ Leaked ထွက်လာတဲ့စာရင်းတွေ
မိတ်ဆွေချင်းမျက်နှာပျက်ရမှာစိုးလို့ တဆင့်ပြန်ပြောသူတွေကို ပေးထားတဲ့ကတိနဲ့ လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖေါ်ပြနိုင်ဘူး
("USD တွေ အများကြီး။ သုံးလို့မရဘူးတဲ့။ ပိုက်ဆံများ သုံးလို့မရဘူးဆိုတာ ရှိတာကျနေ။ ဒီကို ရောက်လာတုန်းက ကိုယ်နဲ့ပါလာတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေက လေဆိပ်မှာ Declare လုပ်ခဲ့ပြီးသား")
သုံးလို့ရပါတယ် ၀င်ငွေပြနိုင်ရင် သန်းချီပြီးသုံး
နှစ်ကုန်လို့ IRS မြင်သမျှမှာ Output ရှိရင် Input Source လဲပြရမယ်
အ၀တ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေက Form 6059B မှာ 10K ထက်ကျော်တာဖြည့်ခဲ့ရင် IRS က Immigration နဲ့ ချိတ်ထားပြီးသား
("လေဆိပ်ကနေ တရားဝင်ဝင်လာတဲ့အချိန်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ PDF ဆိုတာတောင် မပေါ်သေးဘူး။ အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းလည်း မရှိသေးဘူး။ ငွေပါတယ်။ ပါတဲ့ ငွေက ငါ့ငွေ
အာဏာသိမ်းလိုက်တာနဲ့ နင်တို့ဖြစ်စေချင်သလို ကုန်းကောက်စရာမရှိ မွဲမသွားတာ")
အာဏာသိမ်းပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်မှာအပျော်သုံးဖို့ထားထားတဲ့ USD$ ၅ သောင်းလောက်ကို Declare Limit အတိုင်း ဖတ်ကနည်း အိပ်ကပ်ထဲပစ်ထည့်ပြီး ထွက်လာလိုက်ကြတယ်ပေါ့
(Triple) ထရစ်ပလယ် ဝါးးးးး
(၄) + (၅) + (၆)
(သူ့ဘာသာချာလပါတ်လည်ပြီး ဘာတွေရေးချင်နေမှန်းမသိလို့ ပေါင်းရေးလိုက်မယ်)
သူ့လက်ထဲကပိုက်ဆံ ၇ သိန်း အကုန်လုံးက လူကြုံတွေနဲ့ Cash တွေချည်းသယ်လာတာလို့ ကျွန်တော်မပြောထားဘူး ဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူး
ကျွန်တော် America ကနေ ကားတွေပို့နေတာ
တစ်ခြားနိုင်ငံတွေကနေ Business Accounts တွေထဲကို ဒီမှာ အသုံးပြပြီး Wire Transfer Fee 20$ လောက်ပေးရင် ကြိုက်သလောက်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်
တစ်သောင်းမကျော်ရင် တစ်ယောက်ထဲဆီကို တစ်လအတွင်း ခဏခဏမဟုတ်ရင် ကြိုက်သလောက်ပို့ ရတယ် IRS က မလိုက်ဘူး
("US က ကူညီငွေလက်ခံရရှိမှုသည်လည်း တစ်ခါကောက်ခံ တစ်သောင်းထက် မပိုဘူး") ဆိုပြီး
ဘယ်ပိုမလဲ IRS က ပိုရင်လိုက်ပြီကိုး
(Quadruple) ကွာဒရုပလယ် ၀ါးးးးးးး
("အဲ့ငွေ မှန်သမျှသည်လည်း ကိုယ်ကိုင်ထားတာ မဟုတ်ဘူး")
သေချာတာပေါ့ သူ့အသိ Business Acc တွေထဲမှာ ဥထားတာကိုး
("ပြည်သူ့ကူညီငွေ ကောက်ခံပြီး ပေးပို့တယ်။ ပေးပို့တာသည် Local PDF တွေဆီ တိုက်ရိုက်ပို့တာ။ NUG ကို တစ်ခါမှ မပေးဘူး၊ တစ်ပြားမှ မပေးဘူး")
ဒီမှာ Cash အစစ်နဲ့ ရသမျှအကုန်နီးပါးဘုံး
Computer ကနေ Free Downloadable Certificate Form တွေထဲမှာ စာဖြည့်ပြီးသားကို
လူနာမည်လေးတွေပြောင်းပြောင်းပြီး Amazon က၀ယ်ထားတဲ့ Printable Certificate Paper အထုပ်တွေနဲ့ ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့ ဂုဏ်ပြုလွှာတွေကို Monopoly ပိုက်ဆံလို အရူးတွေပျော်အောင် စာတိုက်ကပို့လိုက် (.pdf) Format နဲ့ email ကပို့လိုက်နဲ့ အလုပ်တွေများနေတာ များနေတာ
(Quintupal) ကွင်တူပလယ် ၀ါးးးးးး
Check တွေ E-Transactions တွေကို ဇော်ဝေစိုးနဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက်ခွဲဝေယူ ကျော်မိုးထွန်းကို အရိုးလေးပေးကိုက်
ပြီးမှကျန်တာလေးတွေကို PDF တွေကိုတိုက်ရိုက်ပို့တာဆိုတော့ သူက US Terrorist Act Law ကိုချိုးဖေါက်ပြီး တရားမ၀င် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကို Financially Support နေတာလို့ ၀န်ခံပြီးသား
(Sextupal) ဆက်စတူးပလယ် ၀ါးးးးးးးး
ဒီမှာ ဖုန်းထက် Phone Plan ကစျေးကြီးတာ
အိမ်လခက ဒီမှာ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် သားအမိချင်းတောင် ရာဂဏန်းထက်လျှော့မပေးဘူး
လာပြန်ပြီ ဘယ်သူမှမသိ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကြီးတွေ
သူကတစ်လ USD 3000$ ၀င်အောင် အိမ်ထဲကနေ ဘာအစားအသောက်တွေရောင်းနေတာလဲ
Online ဆို America မှာ Ebay တစ်ခုဘဲ လူသုံးများတယ် ဘယ်မှာလဲသူ့ Website?
အစားအသောက်ရောင်းဖို့ဆိုတာ US Dept Of Health, FDA approval, Business License တွေအကုန်လိုတယ်
Website ကလဲ FDIC insured Bank တစ်ခုခုက Legal Wired Transaction လုပ်ပေးမှရတယ်
IRS ကရော သိရဲ့လား
အဲ့လိုသာဆို Income Tax မပေးချင်တဲ့သူတိုင်း နှစ်ကုန်လို့ Tax Claim လုပ်ရင် ချစ်လှစွာသော အန်တီကြီးများထံမှလို့ ထည့် Claim လုပ်ကုန်ကြပြီ
IRS ကို Trump တောင် ဖေါရှောလုပ်လို့မရခဲ့ဘူး
သူရေးထားသမျှ IRS ဆီအကုန်ရောက်ပြီသာမှတ်
ယ္ခင် "INS" (Immigration and Naturalization Services)
ယ္ခု USCIS "U.S. Citizenship and Immigration Services" ဆိုတဲ့ လ၀က ရဲ့ FBI အောက်က Finger Print & Application Processing Dept မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာဘဲ
သူဒီကို ဒေါ်စုမျက်နှာနဲ့ US က Humanitarian Parole I-131 Form ဖြည့်ပြီး US က I-134 (Sponsor) နဲ့လာခဲ့တာကို Special Status ထင်နေပုံရတယ်
တစ်ကယ်တော့ Humanitarian Parole ဟာ Refugee program ရဲ့အောက်တစ်ဆင့်မို့ ယာယီခိုလှုံနေထိုင်ခွင့် ၁ နှစ်ဘဲပေးထားတာ
အဲ့ဒိ ၁ နှစ်အတွင်းပြဿနာကင်းလို့ အဖမ်းအဆီး အတိုင်အတောမခံရမှ Green Card ကို I-485 နဲ့ပြောင်းလျှောက်လို့ရတယ် ဒါပေမယ့် ခုမလွယ်တော့ဘူး
Refugee Visa အစစ်က US ၀င်လာကတည်းက ရောက်ပြီး ရက် ၁၂၀ အတွင်းမှာ Green Card အိမ်ကိုလှမ်းပို့တယ်
ကျွန်တော်က အဲ့ဒိလူတွေကို လျှောက်လွှာဖြည့်တာ Interview ဘာသာပြန်ပေးတာတွေခုထိလုပ်နေတုန်း
ဒုက္ခ ဒုက္ခ အိုးမိုင် ဗုဒ္ဓ
(Octupal) အောက်တူးပလယ် ဝါးးးးးး
ပေါတောတောကလေးကြိုက် Drama တွေကို တုံ့ပြန်စရာမရှိပေမယ့် နောက်ထပ်သူမသိတာက ကျွန်တော် US Citizen ဖြစ်လာတာ စစ်ထဲ၀င်လိုက်လို့ဆိုတာဘဲ
နင်နဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး နားလည်လား
All eyes on you kiddo.
ဒီ Post ပါ အချက်အလက်အားလုံး မှန်ကန်ကြောင်းကိုအပြည့်အ၀ အာမခံပါတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီး ရိုးသား/အယုံလွယ် တဲ့ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ကမြန်မာတွေအားလုံးသိအောင် အားလုံး ၀ိုင်းပြီး အများဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး Share ပေးပါ
သင် Share ပေးလိုက်ရင် လူတစ်ယောက် ပန်ဆယ်လိုတို့ရဲ့ သရုပ်မှန်ကိုသိသွားတိုင်း တိုင်းပြည်ရဲ့ အန္တရာယ်တစ်ခုကို ကာကွယ်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်
ကလေးတွေရဲ့အသက်သွေးတွေရင်းပြီး သာယာနေတဲ့ လူလိမ်မ နဲ့ NUG အကြမ်းဖက်တွေကို တားဆီးလိုစိတ်ရှိတဲ့မြန်မာတိုင်း ရှိသမျှမီဒီယာတွေမှာ Share + Copy & Re-Post လုပ်ပေးကြပါ
B♭ C7 Am Dm
နာက်င္ ... ဝမ္းနည္း တိုးတိတ္ .. ဒီ အေမွာင္ထုထဲ ..
V1 + (Gm | C7 | F | F♯dim) 3
ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္ ပ်ံ႕နွံ႕ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ OIC ရုံး ဖြင့္လွစ္မည့္ သတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
၄င္းရံုး ဖြင့္လွစ္ရန္ ကိစၥမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ သိရွိရသည္။
Copyright © 1997 - 2022 Myo Chit Myanmar